unyaka 1 10 edlule #876 by aadschouten
Ukuhamba kwesondo lempumulo kungasebenzi, ngibona amasilinda wokunyakaza esebenza, kepha umhlangano wamasondo ekhaleni ubambeke phakathi.
yini inkinga ??? Ngicabanga ukuthi inkinga ise-MDL.
unyaka 1 10 edlule - unyaka 1 10 edlule #898 by Josh13215
Ivili lezinsiza lisebenza kimi kodwa injini ivulekile njengoba nje nginomoya ongenalutho.
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-10 ezedlule Josh13215.
Isikhathi ukudala page: 0.166 imizuzwana